Brussels dia mandray ny andiany faha-24 an'ny Pride Pride
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Brussels dia mandray ny andiany faha-24 an'ny Pride Pride
Associations News • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • LGBTQ • Vaovao • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Toy ny tamin'ny taona lasa, Brussels dia hankalaza ny fiarahamonina LGBTI + miaraka amin'ny Belgian Pride, amin'ny Mey. Ny lohahevitra amin'ity andiany vaovao ity dia ny "intersectionality". Fetiben'ny Pride Belzika dia hotontosaina ny 3 ka hatramin'ny 19 Mey ary hisy fampirantiana, fandefasana horonantsary ary fihaonambe momba io lohahevitra io. Mandritra ny 3 andro, ho velona ny araben'i Bruxelles satria mifarana amin'ny fetin'ny Pride Weekend sy Pride Parade ny festival.
Ity no andiany faha-24 amin'ny Pride Belzika hatreto. Hanokatra ny vanim-potoana hambom-pon'ny eropeana izy io. Araka izany, ny renivohitra be mpitia an'i Eoropa dia hampiseho ny fahasamihafana sy ny fisokafany ho an'ny fiarahamonina LGBTI +, ary koa ny zotom-piainany. Ny Pride Belgique dia hatao mandritra ny 3 andro mandritra ity fanontana vaovao ity.
Ny fanombohana ny fiavonavonana Pride Kick-Off amin'ny zoma 3 mey 2019 dia hanamarika ny fiantombohan'ny fety. Hiseho eny amin'ny araben'i Bruxelles ny matso amin'ny feon'ny Fanfare du Meyboom. Ny diabe dia handalo ny Manneken-Pis izay hanome akanjo natokana manokana ho an'ny fotoana.
Mandritra ny roa herinandro ho avy, ny Fetiben'ny Pride Belzika dia hampiditra hetsika isan-karazany manodidina ny lohahevitra hoe "intersectionality" (www.pride.be/allforone). Satria, ankoatry ny fety, ny Belzika Pride Parade sy ny fetiny no fotoana mety hanomezana vahana ny vondrom-piarahamonina haneho ny fitakiany sy hamoronana toerana hisaintsainana politika. Izy rehetra dia mikendry ny hamorona fiarahamonina mitovy sy miray hina.
Belgian Pride, ny fara tampon'ny fetibe roa herinandro, dia hanasongadina programa miloko:
• Faran'ny Herinandron'ny Fireharehana dia hitranga mandritra ny telo andro, manomboka ny zoma 17 ka hatramin'ny alahady 19 mey
• Amin'ny zoma, Rainbow Village dia hanokatra ny fetin'ny faran'ny herinandro. Ireo andrim-panjakana ao amin'ny distrikan'i Saint Jean dia ho velona miaraka amin'ny feon'ireo set DJ sy fampisehoana hafa kasaina hatao amin'io fotoana io.
• Amin'ny sabotsy, faha-18 ny Pride Parade dia hameno ny araben'ny fon'ilay mpifehy azy raha toa kosa ny Pride Village handray fikambanana 60 eo ho eo ary koa DJ sy mpanakanto maro izay faly amin'ny Mont des Arts.
• Amin'ny Alahady, hetsika maro no hatao ao amin'ny Village Rainbow.